Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Oo Sheegay Iney Xalliyeen Colaad Ka Taagneed Gobolka Hiiraan – Kalfadhi
Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Oo Sheegay Iney Xalliyeen Colaad Ka Taagneed Gobolka Hiiraan
Shiikh Cismaan Barre Maxamed guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle oo la hadlay warbaahinta Kalfadhi ayaa sheegay in dadaal dheer oo ay galeen kaddib ay ku guuleysteen in ay xalliyaan colaad laba beel u dhaxaysay kana taagneed gobolka Hiiraan.
Waxa uu sheegay in guddoomiyaha gobolka Hiiraan iyo ku xigeennadiisa ay hadda ku suganyihiin caasimadda Hirshabeelle ee Jowhar, xallinta arrintaas ayuuna sheegay in ay ugu yeereen madaxda sare ee Hirshabbeelle.
Guddoomiye Shiikh Cismaan ayaa sheegay in isaga iyo wafdi kale oo ka socda Hirshabeelle ay dhawaan tagi doonaan magaalada Beledweyne si ay u u dhammeystiraan hishiiska.
Colaadda labada beel u dhaxeysa labada beel ayaa ka billaabatay xoolo lakala dhacay waxa ayna gaartay in dad lakala afduubto.
Halkan ka dhageyso wareysiga guddomiye Sh.cismaan.
Ogoow Sababta Xilka Looga Qaaday Garsooyaraashii Maxkamadda Sare